Buufinnada, Xabkaha Xumbada, iyo Martech: Midkee Aan Lahayn? | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 12, 2017 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Patrick Tripp
Si ka duwan buufinnada iyo xanjada xumbada, Martech ma qarxi doono markii loo kordhiyo waxa u muuqda dhibic jaban. Taabadalkeed, warshadaha Martech ayaa sii wadi doona rogrogmada iyo fidinta oo la jaanqaadaya isbeddelka iyo hal-abuurnimada-sidii loo qabtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Waxay umuuqataa in kororka warshadaha hada uusan aheyn mid la isku haleynkaro. Inbadan waxay weyddiisteen in warshadaha shuhaada-ay kafiican tahay in ka badan 3,800 xal —Waxay garaacday bartiisa dhibcaha. Jawaabteena fudud: Maya, ma ahan. Hal-abuurnimadu ma yaraynayso waqti kasta. Nidaamkan deegaanka ee waligiis sii ballaaraya waa xaqiiqda cusub ee suuqleyda waa inay bartaan sida loo maareeyo.
Tirada xalalka shuhadadu way labanlaabantay ama saddex laabantay sanad kasta tan iyo markii chiefmartec.com ay bilawday daba galka muuqaalka warshadaha suuq geynta sanadkii 2011, ilaa cabirka hadda ah 3,874. Xiisaha shahiidku sidoo kale wuu booday. Sida laga soo xigtay Walker Sands State of Teknolojiyada Suuq-geynta 2017 Warbixinta, boqolkiiba 70 ee 300 suuqleyda la wareystay waxay filayaan in miisaaniyaddooda tikniyoolajiyadda suuqgeynta ee shirkadaha ay kordhi doonaan sanadka 2017; boqolkiiba laba keliya ayaa filaya inay hoos u dhacdo. Mid ka mid ah sababaha ay suuqyadu ugu dhiiranayaan shuhadada: natiijooyinka. Boqolkiiba iyo lixdan boqolkiiba suuqleyda uu wareystay Walker Sands ayaa sheegaya in tikniyoolajiyadda suuqgeynta ee shirkaddoodu hadda ka caawinayso inay shaqooyinkooda si wanaagsan u gutaan. Tani waxay ka timid boqolkiiba 58 sanadkii hore.
Martech wuu shaqeeyaa, qaar badan oo suuqleyduna waxay horeyba u leeyihiin meekh ballaaran. Marka, ku darista qalabka macnaheedu waa helitaanka tikniyoolajiyad sax ah oo lagu taageerayo istaraatiijiyadooda suuq geynta gaarka ah iyo ujeedooyinka. Baahiyaha suuqleyda ayaa ah mid gaar ah, waana sababta ugu badh nus ka mid ah suuqleyda ay codeeyeen 48% ay ku dhisteen xirmooyinkooda xalalka ugu fiican, halka boqolkiiba 21 keliya ay isticmaalaan hal suite oo iibiyayaal ah. Xaqiiqdii, 83% ee suuqleyda isticmaalaya xalalka ugu fiican ee isku-dhafan waxay qiimeeyaan awoodda ay shirkaddu u leedahay “inay ka faa’iideysato awoodda buuxda ee qalabkooda sida aad u fiican or wanaagsan, ”Sida lagu xusay daraasadda Walker Sands.
Sidaas oo ay tahay, dad badan oo suuqley ah waxay dareemayaan in warshaduhu ay u socdaan si ka dhaqso badan sidii ay ula socon lahaayeen.
Xumbada martech ma dillaacayso. Waxay noqon doontaa mid murugo leh oo ballaarineysa-iyada oo had iyo goor sii kordheysa abaalmarinta ciyaartoyda niche-iyo, natiijada, sii wadida taageerada baahida gaarka ah ee suuqleyda. Laakiin kala shaandheynta dhammaan xulashooyinka la heli karo si loo helo kaliya xalka saxda ah waxay u baahan tahay suuqleyda inay yeeshaan istiraatiijiyad ka qaybqaadasho macaamiil oo dhammaystiran, iyo sidoo kale hab wax ku ool ah oo loo mideeyo aaladaha ku habboon ee lagu taageerayo istiraatiijiyaddaas.
Macaamiisha maanta waa kanaal agnostic, marka istiraatiijiyad kasta oo kaqeybgalka macaamiisha waxay ubaahantahay inay noqoto mid iskutallaabta si ay waxtar u yeelato muddada fog. Istaraatiijiyad hawlgal oo ka gudubta xuduudaha gudaha waxay u baahan tahay milkiile leh karti iyo awood uu ku kasbado taageerada fulinta kuna hago ururka isbeddel - oo ay ku jiraan burburka silos.
Hal dariiqo oo looga takhalusi karo silo, iyo sidoo kale in la dhexgeliyo aaladaha shucuur ahaan kala fog, waa iyadoo la qaato habka beer furan. Halkii aad kaliya ku xiri lahayd qalabka shuhadada ee arjiga dalabka, tixgeli inaad ku darto iyaga lakabka xogta. Tani waxay u oggolaaneysaa hoggaamiyeyaasha suuq-geynta inay si dhakhso leh uga fikiraan wixii ka dambeeya suuq-geynta oo ay tixgeliyaan sida loo taageero howlaha sida iibka iyo adeegga guud ahaan shirkadda. Waxay sidoo kale u suurta galisaa suuqleyda inay iskuxiraan tiknoolajiyada xayeysiinta iyo martech si ay sida ugufiican uga faa'iideystaan ​​dhamaan barta macaamiisha la heli karo.
Kaabayaasha Macluumaadka Macaamiisha (CDPs) u dhaqmaan sida a hub taas oo u saamaxaysa ururada inay iskuxiraan xogta iyo codsiyada beerta furan. Tani waxay xaqiijineysaa in suuqleydu ay wax ka qaban karaan isla markaana ay ku hagaajin karaan goob kasta oo taabasho leh macaamiisha. CDPs waxay dimuqraadiyeen helitaanka xogta, Analytics, kanaalada, iyo macaamiisha guud ahaan shirkada. Habkani wuxuu bixiyaa helitaanka deg degga ah ee xogta meel kasta oo ay ku nooshahay, dhismayaal iyo ilo ganacsi oo kala duwan. Suuqgeyaashu sidoo kale waxay si fudud uga faa'iideysan karaan farsamooyinka casriga ah sida dhibcaha maskaxda iyo barashada mashiinka. CDPs sidoo kale waxay fududeeyaan helitaanka kanaal kasta iyada oo loo marayo nidaam deegaan oo furan. Ku xiridda kanaal kasta oo dijital ah ama dhaqameed ah - oo ay ku jiraan DMP-yada, DSPs, ESPs-waxaa lagu dari karaa beer furan.
Natiijada? Adeegsiga habka beerta furan ee maaraynta xalka martech ee sii kordhaya waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay hagaajiyaan ka-qaybgalka macaamiisha guud ahaan shirkadda. Taasi waa, in la abuuro istiraatiijiyad is-dhexgal ah oo ka sarreysa suuq-geynta, iibka, iyo adeegga, oo taabanaya macaamiisha, shaqaalaha, howlaha, iyo wax soo saarka.
Xumbo aan lahayn Pop
Xumbada martech ma qarxin. Mana ahan mid waqti dhaw soconaysa. Iyada oo tirada sii kordheysa ee iibiyeyaasha ku jira booska, iyo sidoo kale hal-abuurnimada socota iyo xoojinta, suuqleydu waxay heli karaan kaliya xalalka saxda ah ee wax looga qabanayo baahidooda gaarka ah, rabitaankooda, iyo rabitaanadooda.
Ma jiraan qol loogu talagalay hal qaab oo keliya oo loo maro suuqgeynta maanta, taas oo macnaheedu yahay inaysan jirin meel loo maro hal-cabbir-ku-habboon dhammaan teknolojiyadda suuqgeynta. Suuqleyda raadineysa inay udhaqaaqaan qaab iskutallaab ah oo ku saabsan ka-qaybgalka macaamiisha waxay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan iibiyeyaasha tikniyoolajiyada suuq-geynta ee leh istiraatiijiyad is-dhexgal ah sida awood u siinta habka beer-furan ee is-dhexgalka. Taasi waa sida suuqgeynta ROI ay u ballaarin doonto si sax ah oo ay weheliso kororka martech.
Tags: 2017nooca ugu fiicanxumboCDPMadal Macluumaadka MacaamiishadmpDSPgaar ahaanmuuqaalka suuq geyntasuuqgeynta roihalgankamartech xumboxidhmooyinmrooiROIgobolka tikniyoolajiyadda suuqgeyntaxaalad shahiid ahbacaadka socodsiiyaha